Madheshvani : The voice of Madhesh - गुणस्तरमा “कम्प्रोमाइज” छैन : ब्रजेश कुमार झा
गुणस्तरमा “कम्प्रोमाइज” छैन : ब्रजेश कुमार झा
विभागीय प्रबन्धक साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड
० साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले आफ्नो ५६ औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ । यसको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?
— नेपालमा नुनको आफ्नै स्रोत नभएको र भौगोलिक विकटताका कारण पनि नेपालमा नुनको कारोबार गर्न गाह्रै थियो । भारत र तिब्बतबाट नुन आयात गरिन्थ्यो र त्यो नुनलाई यहाँ ल्याइसकेपछि पनि विभिन्न ठाउँमा पु¥याउनु पर्ने र त्यसका लागि नेपालको स्टक नहुँदा जहिले पनि समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो । यो अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नुनको कारोबारमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई समेटेर भारत वा तिब्बतबाट आयात गर्ने, यहाँ ल्याएर ढुवानी समेत गर्न सरकार स्वयं पनि आफ्नो सेयर हालेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनसीपको प्रथम संस्थाको रूपमा साल्ट टेनिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडको जन्म भएको हो । विं.स. २०२० साल भदौ २७ गते साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडको स्थापना पछि नुनको कारोबार गर्न स्थापना भएको यो संस्थाले विस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै गयो । देशभित्र उत्पादन हुने गहुँबाट बनाउन सकिने मैदा, पिठो, सुजी आदिको बजारीकरण गर्नुपर्छ र यस्ता उत्पादनहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपालमै मैदा मिल खोल्नुपर्छ भनेर पहिलो पाइला यही संस्थाले चालेको हो । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले पहिलो पटक मैदा मिल स्थापना गरेर नेपालमा भारतीय पैदालाई प्रतिस्थापन ग¥यो र देशभित्र औद्योगिकीरणको समेत सुरूवात ग¥यो ।
० नुन बाहिरबाट आयात नगरी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने विषयमा पनि केही सोचिएकोे छ ?
— नुनको मुख्य स्रोत भनेको सामुद्रिक पानी नै हो । कतै कतै नुनको पहाड पनि हुन्छ । भौगर्भिक परिवर्तनले गर्दा कुनै समयमा समुन्द्र रहेको ठाउँ अहिले पहाडको रूपमा रहेको छ भने त्यहाँ नुन पाइने गरिएको छ । नेपालभित्र नुन पाइने त्यस्तो कुनै स्थान अहिलेसम्म भेटिएको छैन । अहिलेसम्म हामी नुनमा पुरै भारतकै भरमा छौं ।
० साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशले जसरी विभिन्न वस्तुको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ती वस्तुहरूको बजारीकरण कसरी गर्दै आइरहेको छ ?
— हामी गुणस्तरमा मुख्य ध्यान दिन्छौं । सर्वसुलभ उपलब्धता र थोरै मुनाफा लिएर कारोबार गर्दा आम उपभोक्तालाई पनि सेवा पुग्ने र त्यसले केही मात्रामा भए पनि संस्थालाई मुनाफा पुग्ने उद्देश्य अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौं ।
० साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले अहिलेसम्म उत्पादन गरेकाभन्दा बाहेर नयाँ योजनाहरू के–के रहेका छन् ?
— हामीले भूकम्पपछि एउटा अमेरिकी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर फ्युचर गुप्र भनेर स्थापना गराएका छौं । त्यसले नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माणको कार्य पनि सुरू गरेको छ । दुईवटा घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौं । यस वर्षभित्र त्यस्ता १५ वटा घर बनाएर काठमाडौं उपत्यका भित्र बेच्ने हाम्रो योजना रहेको छ । नेपालमा नै उत्पादन भएको तोरीलाई बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ गएर नेपाल बनस्पति घ्यु उद्योगलाई तेल मिलको रूपमा परिणत गरी विभिन्न मेसिनहरू जडान गरेर तेल उत्पादन गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं । पेट्रोल पम्प स्थापनाको कुरा पनि अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका लागि आयल निगममा प्रस्ताव पठाएका छौं । छिट्टै यो काम अगाडि बढ्छ ।
० साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको छ कि निजी लगानी पनि छ यसभित्र ?
— लगभग ७८ प्रतिशत जनताकै सेयर रहेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामत्विमा रहेको नेशनल ट्रेडिङ्ग हो । नेपाल सरकार वाणिज्य विभाग र नेशनल ट्रेडिङ्गको सेयर साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनमा रहेको छ । दुबै गरेर लगभग २२ प्रतिशत जति सेयर नेपाल सरकारको भयो र बाँकी सेयर आम जनताकोसेयर हो ।
० साल्ट ट्रेडिङ्गमा अनियमितता भइरहन्छ भनेर समय समयमा समाचारहरू आइरन्छ खासमा के हो ?
— नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्रको जनताको लागि ढुवानीमा दिएको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर कुनै पत्रिकाले लेख्यो तर त्यो सम्भव हुँदैन । एक पटक जुन कामको लागि रकम निकासा भएको हुन्छ, त्यो रकम खर्च भइ सक्छ । अब फेरी त्यही रकम अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिदैंन । त्यस्तै जापान सरकार र भारत सरकारले गोदाम निर्माण गरिदिएको थियो । त्यो गोदामहरू निर्माण गर्दा जति लागत लागेको थियो, त्यो रकम बराबर सेयरमा परिणत गर्नुप¥यो भन्ने आवाज पनि उठ्यो । त्यसै विषयलाई अतिरञ्चित बनाएर केही सञ्चारमाध्यमले हाम्रो संस्थाको बारेमा नकारात्मक खालका समाचार प्रशारण, प्रकाशन गरे जुन गलत थियो । त्यस्तो अनियमितता केही भएको छैन ।
० यस संस्थाबाट उत्पादित वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो स्थान ओगट्न कति सफल भएको छ ?
— उपभोक्ताले ढुक्क भएर हाम्रा वस्तुहरू उपभोग गर्दा हुन्छ । हामीले बिक्रि वितरण गर्ने कुनै पनि दालमा पोलिस गरिएको हुँदैन । नेपाल सरकारले गुणस्तरको आधारमा तोकेको मापदण्डको आधारमा हामीले वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्छौं । हामीले बजारको अन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि स्वस्थ्यकर वस्तुको हिसाबले जहिले पनि अगाडि हुन्छौं । अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धामा मात्र हामी पछाडि पर्ने गरेका छौं ।
० नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर अधिकांश वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक उपभोग्य सामान आयात गर्नु नपर्ने गरी नेपाल कहिले सक्षम होला ? यसका लागि तपाईहरूको केही प्रयास छ ?
— कृषिको लागि सबैभन्दा पहिले जग्गा चाहियो । त्यसपछि उन्नत बिऊ चाहियो, रासायनिक, प्रागांरिक मल चाहियो, सिँचाईको सुविधा हुनुपर्छ र त्यसपछि बजारीकरणको कुराहरू आउँछन् । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहका छौं । बिउबिजनको लागि १२०० देखि १५०० मेट्रिक टनसम्म गहुँको बिऊ हेटौंडामा वार्षिक उत्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो उत्पादनको तरिका पनि फरक छ । हामीले उत्पादन गरेका उन्नत जातको बिऊ किसानलाई दिन्छौं, समय–समयमा हाम्रो प्राविधिकहरूले निरीक्षण पनि गर्छन् र उत्पादन भइसके पछि बजार मूल्यभन्दा केही बढी मूल्य तिरेर त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर जुन बीऊको रूपमा बिक्री वितरण हुन्छ बिक्री गछौं । जुन बिऊको रूपमा बिक्री हुँदैन, त्यसलाई हाम्रो आफ्नै उद्योगमा पिठो बनाएर त्यसलाई फेरी बजारीकरण गछौं ।
हामीले तेलको उत्पादन सुरू गरेका र्छौं र रासायनिक मलको विषयमा पनि हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौं । बिऊबिजन, सिचाइँ र रासायनिक मलको विषयमा सरकारले केही सहयोग गर्ने हो भने आत्मनिर्भर हुन सहयोग हुन्छ ।
० साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले ५६औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
— हामीले ल्याएका वस्तु विश्वासका साथ प्रयोग गर्ने उपभोक्तलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय सामानहरू नै खरिद गरौं र स्वस्थ रहौं भन्न चाहन्छु ।